Macluumaadka Barnaamijka Bulshada ee NCS Sheffield - Element Society
Ku biir NCS Sheffield ay ku shaqeyneyso Element Society maanta!
Ha seegin fursadaada inaad ku biirto NCS.
Xilliga xagaaga oo dhan, waxaad ku noolaan doontaa meel ka fog guriga, horumarinta xirfadaha si aad uhesho CV-gaada, iyo inaad la kulanto dad cajiib ah oo aan waligaa ilaawin doonin. Haddaba maxaad sugeysaa? Isbeddelka wuxuu bilaabmayaa HAA!
Maqnaansho 1: HELI KARAA
Ugu horreyn, waqti ayaad ka joogi kartaa guriga oo ku raaxeysanaaya waxqabadka banaanka ee macallinka.
Waxaad ku xiran doontaa saaxiibadahada waxqabadka ficil-hawleedka ah ee xarun dhaqdhaqaaqyada dibadda ah sida waxqabadka dhagaxyada, socodka riwaayadaha, huuriga, iyo huuriga.
XEERKA 2: HELI KARAA
Ku soo dhowow guriga, kooxdaada waxay waqti ku qaadanayaan barashada degaankaaga.
Waxaad la kulmi doontaa dadka ka socda ganacsiyada maxalliga ah iyo ururrada jaaliyada kuwaas oo kaa caawin doona adiga iyo xubnahaaga NCS horumarinta xirfado cusub.
MAGAALADA 3: GUDBINTA MARKA
Waxaad ka shaqeyn doontaa kooxdaada si aad u qorsheyso oo u xalliso maalgalinta mashruuca aad qabato ee bulshada aadka u ah oo sameyn karta faraq dhab ah meesha aad ku nooshahay.
Waxaad markaa ka dhigeysaa calaamaddaada aagga xaafaddaada, oo mashruuca waxqabadka bulshadaada la gaarsiiyo kooxdaada.
IYO CELEBRATE ...
Ugu dambeyntii, marka aad dhamaysay mashruuca ficilka bulshada, waa waqtigii lagu dabaaldegi lahaa a xisbiyada qalin jabinta.
Waxaad heli doontaa shahaadada uu saxiixay ra'iisul wasaaraha iyo helitaanka fursado gaar ah si aad u sii wadato iskaa wax u qabso iyo ku xirnaado degaankaaga iyo NCS.
KALA DUWAN TAHAY LAMBAR
NCS kaliya toddobaadkii ugu dambeeyay 4, oo leh nasasho u dhexeeya, sidaas darteed waxaa jira waqti badan oo loogu talagalay xafladaha muusikada iyo fasaxa qoyska. Khibrada NCS waxay ku kacday kaliya £ 50, oo ay ka mid yihiin cunto, waxqabadyo, iyo hoy, oo leh kaalmo lacageed oo la heli karo. Samee NCS qayb ka mid ah xagaaga!
* Barnaamijkan oo ay bixiso Element Society waxay kaa qaadi doonaan wax ka badan £ £ 50, taageero lacageed haddii loo baahdo *
Element Society waxay bixisaa barnaamijyada NCS sanadka oo dhan. Barnaamijyada way kala duwanaan karaan iyagoo ku xiran cidda aad ka qayb qaadanayso, iyo markaad sannadka ka qaybqaadanaysid, markaa hubi inaad hubiso sida dhabta ah ee barnaamijka aad dooratay.
Wixii macluumaad dheeraad ah, na soo wac 0114 2999 210, ama e-mail our Team NCS at ncs@elementsociety.co.uk
*** Hubso inaad xulato Xulashada adoo bixiyahaaga si aad u hesho qiima dhimista £ 15 online!